Narahi Daty Fahatsiarovana Indray Avy Eo
Dia tafintohina eo amin ‘ ny indray andro eo an-tokotanin-tsekoly, nanomboka tamin’izay dia lasa mpinamana. Fa ny fotoana dia ny fahavalo rehefa nihalehibe izy ireo ho afa-misaraka ny fanirian-daza, amin’izao fotoana izao dia miampita ny lalana indray manatrika ny sekoly iray ihany. Naruto AU Yeah, aho, d fa tsy ho ao an-trano miaraka amin’ny gazety. Ny blonde zazavavy whined mipetraka eo akaikiny ny zaza. Nahoana no Krismasy aina no hamarana izany ny fifadian-kanina? Ugh nahoana ianao ka giddy taorian’ny fety? tena manelingelina. Ion vonto mipetraka ka niampita ny fitaovam-piadiana nibanjina fotsiny ny zazavavy amin’ny fahasorenana. Ny toe-po depresses ahy kokoa. ny Sakura dia ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’i fanahy. Naruto nibitsika ny zazalahy amin’ny resaka zava-misy feo. Ny anarany dia midika hoe voaroy mamelana toy izany ny f misy dikany ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany, dia tao amin’ny lohataona. Izy dia nahazo bebe kokoa faly satria ny sekoly ve fa fetin’ny lohataona isan-taona momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany. Ny blonde zazalahy hoe amin’ny rano tsiky namoritra ny tanany ao ambadiky ny lohany. izany dia ny lehibe foana ny fifanarahana. Sakura dia ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana? Angamba aho, dia tokony hahazo ny zavatra tena manokana. Fa ny fetibe ihany volana vitsivitsy lasa. Donald nieritreritra nijery ilay zazavavy izay rehetra tsiky amin’ny tsara indrindra ho azy ireo sipa. Tach aho, dia mahazo ny zavatra mahagaga avy eo.
Izy no goanna torimaso ny amin’ny Ion dia ho ny faran’ny herinandro ka ny any an-trano miaraka. Donald hoy huffing sy puffing amin’ny eritreritra. No ahafahako mahita kely ny fahasaro-piaro? Ny rahalahy nangataka faly mitarika ny lalana an-trano. Ho feno fankasitrahana fa tsy nisy zazalahy izy dia mandany ny faran’ny herinandro. Koa satria isika tsy toy izany am-pianarana aho dia tsy maintsy mandeha any an-tsekoly aho. Sai namaly indray. Fa na dia izahay dia tsy ao amin ‘ ny kilasy mbola mandre ny momba anao. Reko ny momba anao sy izay miakatra fitsarana ireo tovovavy efa somary akaiky izay tena manafintohina ahy. Henoko izy dia ny olon-tiany.
Sai mbola hiteny
Hangidihidy nipoaka tao hehy raha Saluki nandeha maneran-maso tao amin’ny fanehoan-kevitra ary nijery izy nanafina ny mena izay nitombo eo amin’ny takolany. Tsy fantatro aho, dia handeha manontany neny rehefa mody.
Namaly izy indray
Tiako mba ho ny lehibe indrindra dia ankehitriny izy dia mbola hahazo
← Dia Mampiaraka Ny Lahatsary Amin'ny Chat. Webcam ny Firaisana ara-nofo amin'ny chat
Free Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana →